Articles tagged 'cremer'
ICC suspends Zim 'fixer' 28 March 2018 HARARE - Rajan Nayar, a domestic cricket official in Zimbabwe, has been suspended from all cricketing activities for 20 years by the ICC for attempting to improperly influence an international match. The incident had taken place in October last year when Nayar approached Zimbabwe captain Graem...
Cremer relishes Dhaka challenge 6 September 2017 HARARE - Zimbabwe cricket captain Graeme Cremer is confident he will be a valuable asset for Dhaka Dynamites when the fifth edition of the Bangladesh Premier League (BPL) commences in two months' time. Cremer will be one of the several local players snatched by various BPL sides together with ...
Tigers' win inspires Graeme Cremer 1 September 2017 HARARE - Zimbabwe cricket national team captain Graeme Cremer has been inspired by Bangladesh's sensational and maiden 20-run win over Australia in the opening Test in Dhaka on Wednesday. Tigers' spinner Shakib Al Hassan walked away with the man-of-the-match gong and $1 500 richer courtesy of ...
Zim seek series whitewash 24 June 2017 HARARE - After clinching the One Day International series with a game to spare on Thursday, Zimbabwe cricket team can today claim a rare series whitewash against the Netherlands in Amstelveen. Solomon Mire (82) and Craig Ervine (77) scored crucial half centuries as Zimbabwe chased down Nethe...
Zim draw first blood 21 June 2017 HARARE - Zimbabwe took off to a winning start in Netherlands with a comfortable six-wicket win over the Dutch in the first match of the three One Day International series at Amstelveen. The hosts were bundled out for 142 runs from 37.5 overs before the visitors surpassed the target reaching 14...
Zim shift focus to Netherlands 20 June 2017 HARARE - Zimbabwe continue with their tour of Europe as they take on hosts Netherlands in the first match of the three One Day International series at Amstelveen this morning. Heath Streak's side salvaged a series draw against Scotland on Sunday courtesy of a Graeme Cremer five-for and batsman...
Cremer's five-for levels ODI series 18 June 2017 GLASGOW - Zimbabwe's spin-bowling attack capitalised on an overeager batting approach with captain Graeme Cremer's 5 for 29 doing the bulk of the damage to wipe out Scotland for 169 in 42 overs before Sikandar Raza's composed half-century clinched a six-wicket win for the tourists at the Grange. ...
Cremer questions Waller's dismissal 17 June 2017 HARARE – Graeme Cremer is a perfect gentleman and no doubt why he chose to play the gentleman's game of cricket. Rarely do you see the reserved Zimbabwe Cricket captain make an issue about umpiring decisions but when he does you ought to give him some benefit. Zimbabwe went down to Scotland...
Scots-Zim series gets underway 15 June 2017 HARARE - The Zimbabwe cricket team take on Scotland in the opening match of the two-One Day International series in Edinburgh this morning hoping for a flying start against the Associate side. Captain Graeme Cremer said they have prepared to the best of their ability but will not take the host...
Rain fears for Zim in Scotland 14 June 2017 HARARE - There are fears that Zimbabwe's two One Day Internationals against Scotland in Edinburgh might be affected by the wet weather currently prevailing in the United Kingdom. Zimbabwe left for Scotland on Sunday via Dubai and arrived on Monday ahead of tomorrow's first encounter. [Googl...
Graeme Cremer sees some positives 2 June 2017 HARARE - Zimbabwe cricket captain Graeme Cremer says the team will make good use of their forthcoming matches as momentum slowly builds up towards the 2019 ICC World Cup qualifiers. The tournament to be held in England next year will feature 10 teams, down from 14 teams that participated at th...
Taibu, Butcher in reunion 1 June 2017 HARARE - Ex-Zimbabwe cricket coach Alan Butcher tried to convince Tatenda Taibu to come out of retirement when the two met in England recently. Taibu, the first black Zimbabwe captain, quit playing cricket in 2012 for the church when he was only 29 before he was lured back as the convenor of s...
Williams' century flattens Canada 19 May 2017 HARARE - The Zimbabwe A cricket side have won their three-match series against Canada following yesterday's 78-run win in the second one-day game largely thanks to Sean Williams' unbeaten century. The hosts had won the first match last Tuesday by two wickets and they now carry an unassailable ...
Cremer's wife jumps to cricket team's defence 7 March 2017 HARARE - Having been stung by the critical criticism the Zimbabwe cricket team got form ex-players after the defeat to Afghanistan, captain Graeme Cremer's wife Merna come to the defence of her man his players on social media. Zimbabwe were dismissed 54 all out in the final ODI against the Asi...
Zim back in it 22 February 2017 HARARE - The jinx is broken. Zimbabwe are back in the series with a hard fought three runs victory over Afghanistan in the third ODI at Harare Sports Club yesterday. The hosts put in one of their worst batting displays in the series so far as they were bundled out for a measly 129 in 32.4 over...
Zim lose first ODI 17 February 2017 HARARE - Zimbabwe suffered a setback when they lost the first ODI to Afghanistan by 12 runs after Duckworth/Lewis (D/L) method at Harare Sports Club yesterday. After winning the toss Afghanistan captain Asghar Stanikzai chose to bat first and the Zimbabwe bowlers restricted the tourists to 215...
Zim on revenge mission 15 February 2017 HARARE - Zimbabwe host Afghanistan in five One Day Internationals (ODIs) beginning tomorrow at Harare Sports Club hoping to avenge for past defeats at the hands of the Associate country. The locals have been embarrassed by the Afghanistan both at home and on neutral venues over the years. O...
Our goal is to win: Cremer 23 December 2016 HARARE - Fed up with the ill-treatment of players by Zimbabwe Cricket (ZC), leg-spinner Graeme Cremer, three years ago, cut short a promising career as he packed his bags to pursue a career in golf. It was a blow to the country that has long been hit by talent drain with a lot of players optin...
Cremer lauds Streak's appointment 17 October 2016 HARARE - Zimbabwe CRICKET (ZC) captain Graeme Cremer (pictured) says Heath Streak's appointment as coach will give the side a good chance of qualifying for the 2019 Cricket World Cup. Streak, a former Zimbabwe captain and assistant coach, was unveiled this week to replace Dav Whatmore, who was...